Muuri News Network » SAWIRO: Ciidanka Xasilinta oo Maanta ka hortagay Arin qatar weyn ku ah reer Muqdisho…
SAWIRO: Ciidanka Xasilinta oo Maanta ka hortagay Arin qatar weyn ku ah reer Muqdisho…
Howlgal Ciidamada amniga Soomaaliya ay maanta ka sameeyeen degmada Kaaraan ee gobolkan Banaadir ayaa waxa ay ku Gacanta ku dhigeen Goob lagu Karin jiray waxyaabaha Maanka dooriya iyo Saddex ka mid ah dadkii karinayay iyo kuwii ka Ganacsanayay waxyaabahaas maanka dooriya.
Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Xaaji Nuur ayaa sheegay in Waaxda Nageyle ee degmada Kaaraan laga sameeyay howlgalka lagana helay Xaruntii ugu weyneyd ee lagu karin jiray Calaqa.
Waxa uu sheegay ay Goobta ka soo saareen Digsiyadii iyo Caagagii Calaqa lagu sameynayay,iyo dhammaan Agabkii ay isticmaalayeen Ragga ku howlanaa sameynta Calaqa kuwaas oo uu sheegay in ay qeyb ka ahaayeen kuwa dhibaatada ku hayay Shacabka degmada Kaaraan.
Ugu dambeyn waxa uu sheegay in hwolgalkaan ay siiwadi doonaan ilaa iyo inta laga ciribtirayo Burcad uu sheegay in ay dhibaato weyn ku hayaan Shacabka ku nool degmada Kaaraan.
Howlgalka Maanta ayaa ku soo aadaya xili shalay banaanbax cabasho ah ay dhigeen Shacabka degmada Kaaraan,intasi kadibna howlgal la sameeyay lagu qabtay 11 Nin oo sida la sheegay ka mid ahaa maleeshiyaad dhibaato ka wada Suuqa degmada Kaaraan.